नेपालमा संक्रमण घट्यो, लापरबाही बढ्यो ! बाहिर निस्कने जमात यत्रतत्र - नेपालबहस
शुक्रबार , असार ११, २०७८
गृहपृष्ठ › स्वास्थ्य › Covid-19
नेपालमा संक्रमण घट्यो, लापरबाही बढ्यो ! बाहिर निस्कने जमात यत्रतत्र
| २१:१५:१० मा प्रकाशित
२३ जेठ, काठमाडौं । जेठको पहिलो साता नेपालमा कोभिड–१९ संक्रमण र त्यसबाट हुने मृत्युदर उच्च थियो । जेठ १ गतेको तथ्याङक हेर्ने हो भने आठ हजारभन्दा माथि दैनिक संक्रमित हुँदा १८७ जनाले ज्यान गुमाएका थिए । त्यसबेला मृत्युदर पनि बढ्दो थियो । जेठ दोस्रो साताबाट संक्रमण दरभन्दा निको हुने दर विस्तारै बढ्न थालेको छ ।
आजको तथ्याङ्क हेर्ने हो भने झण्डै ३ हजार ५०० संक्रमित हुँदा निको हुने दर झण्डै दोब्बर छ हजार ६०० माथि पुगेको छ । विगतमा दैनिक २४५ जनासम्म मृत्यु भएकोमा अहिले मृत्युदर घटेर दुई अङ्कमा झर्नु सुखद सङ्केत हो । आज मुलुकभर ९९ जनाले कोरोनाबाट ज्यान गुमाएका छन् । अघिल्लो महिना वैशाखको यो समयमा संक्रमण दैनिक नौ हजार माथि थियो । पछिल्लो समयमा मुलुकभर यसरी सङ्क्रमण र मृत्युदरमा केही न्यूनीकरण आएको देखिएसँगै मानिसको लापरवाही भने बढ्न थालेको छ ।
कोरोना नियन्त्रणमा काठमाडौंको सडक क्षेत्रमा खटिएका एक जना प्रहरीले समेत मानिस फेरि जथाभावी रुपमा बाहिर निस्कने क्रम बढ्न थालेकोमा चिन्ता जनाए । बिहान बेलुका यसरी निस्कने मानिसलाई उपत्यका प्रहरीले नियन्त्रण गर्न सक्ने अवस्था देखिएको छैन । गल्लीका सडक बजारमा अझै प्रहरीको उपस्थिति न्युन हुँदा झनै लापरर्वाही छ ।
निषेधाज्ञा १० दिन थपिएको दिन यही २० गतेदेखि भने उपत्यकामा सवारीसाधन आवागमनम समेत बढोत्तरी भएको छ । दैनिक प्रहरीले सयौँ सवारी साधन नियन्त्रणमा लिए पनि त्यसरी उल्लङ्घन गरेर हिँड्ने सवारी उत्तिकै छन् । प्रहरीको अभिलेखमा मुलुकभरमा दैनिक तीनदेखि चार हजार गाडी अनावश्यक रुपमा सडकमा निस्किएका छन् । नेपाल प्रहरीका प्रवक्ता वसन्तबहादुर कुँवर निषेधाज्ञा उल्लङ्घनविरुद्ध भने कडा रुपमा प्रस्तुत हुँदै आएको बताउछन । उनका अनुसार कतिपयलाई कारवाही समेत गरिएको छ ।
प्रहरीको आँखा छलेर बाहिर निस्कने जमात यत्रतत्र देखिएको छ । कतिपय व्यक्ति दोकान अगाडि बस्ने । अनि ग्राहक आएपछि सटर खोलेर सामान दिने त्यसपछि पुन सटर लगाएर त्यसैगरी कुरेर बस्ने गरेका छन् । यो क्रम मुलुकका अधिकांश क्षेत्रमा जारी छ । कतिपयले कुनै सामान चाहियो भने फोन गर्नुहोला भनेर सटरमा नम्बर टाँसेरसमेत राखेका पाइएको छ ।
निषेधाज्ञा लगाउनुको उद्देश्य संक्रमणको साङ्लो चुँडाल्नु हो । यस्ता गतिविधिले भने साङ्लो चुँडाल्न समस्या हुन्छ । केही समय सर्बसाधारण आफैँ सचेत हुने हो भने संक्रमण रोक्न सकिन्छ । प्रहरीले मात्रै रोक्न सक्छ भन्ने हुन्न ।
प्रहरी प्रवक्ता कुँवर भन्छन, “हामीले सक्ने नियत्रण गरिरहेका छौँ, आफ्नै स्वास्थ्यका लागि हो भनेर मानिसले बुझ्नुपर्ने हो, त्यसतर्फ पनि सचेत गराउने हाम्रो प्रयास जारी छ ।” अहिले मुलुकका खोटाङ र मनाङ बाहेकका ७५ जिल्ला आज पनि निषेधाज्ञामा छ । अत्यावश्यक बाहेकका गतिविधिमा रोक लगाइएको छ । जेठ महिनाभर यो क्रम जारी रहन्छ ।
गएको एक साता उपत्यकाका तीन वटै जिल्ला प्रशासनले निशेषको आदेशलाई कडाइ गरे पनि यही २० गतेदेखि थपिएको १० दिनको अवधिमा खुकुलो गरिँदा सडकमा मानिसको उपस्थिति बाक्लिएको हो ।
काठमाडौंका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी कल्पना घिमिरे अहिलेको आदेशमा निर्माणका गतिविधि तथा ढुवानीका गतिविधिसमेत खुला गरिएको र पसलसमेत सञ्चालन गर्न पाउने भएकाले मानिसको चहलपहल विगतको भन्दा बढ्नु स्वभाविक भएको बताउछन । त्यस विषयमा स्थानिय प्रशासनबाट अनुगमन गर्ने र कमि कमजोरी सच्याउने कुरामा सचेत रहेको उनले प्रतिक्रिया दिए ।
मनोविद् नरेन्द्रसिंह ठगुन्ना कोरोना हट्न थाल्यो भन्ने सूचनाहरु सार्वजनिक भएपछि त्यसले मानिसको सोचमा परिवर्तन गरिदिएकाले बाहिर निस्कन मद्दत गरेको बताउछन । उनी संक्रमण घटेपछि अझै सावधानी अपनाउनु जरुरी छ भनेर चेतना जागृत गराउनुपर्ने सुझाव दिन्छन।
स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले अब तेस्रो र चौथो लहरको कोरोना आउनसक्ने भन्दै चेतनावनी दिइसकेको छ । त्यसबेला बालबालिका बढी खतरामा पर्ने भएकाले त्यसको सामनाका लागि तयारी अवस्थामा रहन अस्पताललाई निर्देशन समेत दिइसकेको छ ।
काठमाडौं प्रशासनले जेठ अन्तिम साताको अबस्थाको तथ्याङ्क हेरेर असारपछि हुने निषेधाज्ञालाई कसरी अगाडि बढाउने भन्ने निर्णय गर्ने जनाएको छ । देशभरका स्थानीय प्रशासनले समेत यही हप्ताका अवस्थाको तथ्याङकको प्रतिक्षा गरिरहेका छन् ।
उपत्यका नगरपालिका फोरमका सचिव मध्यपुर थिमी नगरपालिकाका प्रमुख मदनसुन्दर श्रेष्ठ यस्तो अवस्थामा कुनै पनि हालतमा लापरवाही गर्न हुँदैन भन्छन । संक्रमण केही घटे पनि जोखिम कायमै रहेको हुँदा नागरिक आफैँ सचेत भएर सावधानी अपनाउनुपर्ने कुारमा खेलवाड गर्न नहुने स्वास्थ्य मन्त्रालयको भनाइ छ । रासस
सरकारले निषेधाज्ञाका लागि दिएको छुट बन्द २ दिन पहिले
निषेधाज्ञामा मजदुरको घरमा चुलो बाल्नसमेत सकस २ दिन पहिले
दैनिकी चलाउन समस्या परेका विपन्नलाई राहत वितरण २ दिन पहिले
बिहे भोज नराेकिदा, गाउँभरि नै काेराेना संक्रमित २ दिन पहिले
ट्राफिक प्रहरीले धराप थापेर मुख्य सडक नै छेक्दा जाम ३ दिन पहिले
बागलुङमा निषेधाज्ञाको स्वरूपमा फेरबदल ३ दिन पहिले
पुनः निर्माण प्राधिकरणको संरचना कार्तिक मसान्तसम्म रहने ४ घण्टा पहिले
रसुवाका आठ पत्रकार नगद पुरस्कारसहित सम्मान ४ घण्टा पहिले
विर्तामोड नगरपालिकाकाे पूर्वाधार विकासमा ५६ करोड १४ लाख ४ घण्टा पहिले
लमजुङमा आठ स्थानीय तहको बजेट साढे ४ अर्ब ! ४ घण्टा पहिले
देशभर मनसुनी वायुको प्रभाव, यी क्षेत्रमा भारी वर्षाको सम्भावना ४ घण्टा पहिले
परिस्थितिअनुसार सुरक्षामा विशेष ध्यान दिन आईजीपीको निर्देशन ४ घण्टा पहिले
एघार महिनामा एक खर्ब २१ अर्ब बराबरको निर्यात, आयात कति ? ५ घण्टा पहिले
ओली न्यायपालिकासँग सशंकित ५ घण्टा पहिले
कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको रजिष्ट्रारमा महत ७ घण्टा पहिले
बिनासकाले विपरीत वुद्धिमा दलहरु ७ घण्टा पहिले
बाढी प्रभावित स्थानमा प्रहरीको निशुल्क स्वास्थ्य शिविर सञ्चालन ७ घण्टा पहिले
४ अनलाइन कालोसूचीमा, जनता टाइम्सदेखि सेतोपाटीसम्मलाई काउन्सिलले काट्यो पत्र ८ घण्टा पहिले
सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिद्वारा राष्ट्रियसभाको बैठक आह्वान ८ घण्टा पहिले
कालो मासु अर्थात कडकनाथ कुखुराको मासु खानुका फाइदा नै फाइदा ८ घण्टा पहिले
सुनौलो हजार दिनका आमालाई अण्डा सहयोग १० घण्टा पहिले
नेविसंघका पूर्व अध्यक्ष आले व्यवसायिक मेवा खेतीमा १३ घण्टा पहिले
कोरोनाको तेश्रो लहरसँग जुध्न नर्भिकको पूर्वतयारी, बालबालिकामा यी लक्षण देखिए अस्पताल लैजान सुझाव १४ घण्टा पहिले
रिटमाथिको सुनुवाई संवैधानिक इजलासमा आज पनि जारी १७ घण्टा पहिले
ओलीले मन्त्रीहरुलाई थपे जिम्मेवारी, गृह पौडेललाई, सञ्चार नेम्बाङलाई ९ घण्टा पहिले
दोधारा चाँदनी नगरपालिकाको ६२ करोड बजेट विनियोजन १३ घण्टा पहिले
प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल पाँच वर्ष हुनेमा वरिष्ठ अधिवक्ता दाहालकाे जोड १२ घण्टा पहिले
स्वास्थ्य क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेर नीति, कार्यक्रम र बजेट ल्याउने तयारी ४ दिन पहिले
समृद्धि फाइनान्सको लिलामी शेयरमा आवेदन दिने आज अन्तिम दिन १३ घण्टा पहिले
नेपाल इन्स्योरेन्ससहित ८ कम्पनीका लगानीकर्ताले धेरै कमाए, कुनले कति ? १ दिन पहिले
निषेधाज्ञाबीच बेहुला बेहुली मोटरसाइकलमा सरर ५ दिन पहिले
किशोरी बलात्कार गर्ने युवक पक्राउ ३ दिन पहिले
नगरसभाको नवौँ अविधेशनमा नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत २ दिन पहिले
बिजुली आउने र जाने समस्यामा लमजुङबासी ६ दिन पहिले
दोर्दी बाढी पीडितलाई संघ र प्रदेश सरकारको सहयोग ७ दिन पहिले
हत्या गरि फरार रहेका चार जना भरुवा बन्दुकसहित पक्राउ ३ हप्ता पहिले
महोत्तरीमा एक साता निषेधाज्ञा थप १ हप्ता पहिले
स्वास्थ्यकर्मीमाथि आक्रमण गर्नेलाई कारवाही गर्न देउवाको माग ४ हप्ता पहिले
टालटुल, ढाकछोप समाधान होइन, दीर्घ समाधान खोज्नु जरुरी छ : राणा ४ हप्ता पहिले
राष्ट्रिय जनमोर्चाले सर्वोच्चमा हाल्यो ‘भ्याकेट’, कृष्ण थापा पदमुक्त होलान् ? २ हप्ता पहिले
अपिहिमालको विद्युत् उत्पादन अन्तिम चरणमा ३ हप्ता पहिले
कोरोनाले पुरुषको यौन चाहनामा कमी: अध्ययन ३ हप्ता पहिले
कोरोनाले छाक टार्न मुस्किल परिवारलाई खाद्यान्न वितरण ३ दिन पहिले
इलामका टिका मगरलाई हल अफ फेम सिजन २ को उपाधि ४ महिना पहिले
मिस्टर एन्ड मिस रौनियारको प्रतियोगीको ट्यालेन्ट शो ४ महिना पहिले
पत्रकार समुन्द्र पौडेलको निर्देशनमा ‘बिरानो देश’ १० महिना पहिले
विराटनगरमा उपचारत थप एक कोरोना संक्रमितको मृत्यु ८ महिना पहिले